Home » 社交媒体市场营销
09.05.2020 Category: 社交媒体市场营销
Miyaad ka qayb qaadatay是Taleeshinka Twitter goor dhow吗？ Haddaysan Ahayn，马萨卡塞纳亚?
Isku-xirka Twitter Waa ari suuq-geyn oo hoo dh dhigo ganacsi kasta oo kasta waa inuu ahaadaa。 Waxaa la caddeeyey in a tahay istaraatiijiyad muhiim u ah in dhiso kalsoonida，kor u qaadida wacyiga brandka，iyo in la xoojiyo xidhiidhka dadka dhagaystayaasha ah.
Haddii aad la yaaban tahay sida aad u bilaabi laheyd khadkaaga Twitter，哈尔坎·伊约·哈尔坎·瓦阿.
WHSR Waxay Bilowday adeegeena ishtag EE’WHSRnetChat’，waxanaanay gaarsiisaa kuwa博客，saameyeyaasha，shakhsiyaadka，sumcada，ururada，iwm。 Si ay u ururiyaan ra’yigooda iyo limbaabcelinta mawduucyada la xiriira blogga.
Waxaan bilawnay ololahan doodan Twitter-ka ah ujeedka-si ay uga caawiyaan akhristeyaasheena inay dhisaan博客wanaagsan.
1 #WHSRnet聊天Q1。 Maxay Tahay Xayndaabkaaga 1（s）si aad u soo saarto bloggaaga 2016?
2 #WHSRnetChat Q2。 Maxay Tahay Qalabka Aad u Tagayso ee Maareynta Warbaahinta布尔萨达?
3 #WHSRnet聊天Q3。 Waa Maxay Qaabka Ug wanaagsan ee looga bixi karo bloggaaga?
#WHSRnet聊天Q1。 Maxay Tahay Xayndaabkaaga 1（s）si aad u soo saarto bloggaaga 2016?
2016 Waxay sii wadaa inay noqoto sanad adag oo loogu talagalay warshadaha博客。 Iyadoo la raacayo tilmaamaha cusub ee Google sida ugu wanaagsan ee loo raadin lahaa baaritaannada，博主ayaa la filayaa in ay shaqo adag ku qabtaan si ay u gaaraan heer sare.
Barta blogku waa in ay diirada saaraan bixinta maadooyin wanaagsan oo wax ku ool ah oo akhristayaasha。 Ereyada Kale，博客作者ayaa laga yaabaa inay u baahdaan inay sameeyaan cilmi baaris iyo qoraa dheer oo帖子.
Halkan Waxaa Ka Mid ah颚巴巴哈Qaar Ka Mid ah WHSR ayaa heshay su’aasha ku jirta Twitter-ka ugu horeysay ee Twitter-ka Twitter-ka.
Waxay Soo Saaraan Sheeko Wanaagsan oo ku lug leh akhristayaasha。 Sidoo Kale Samee Qorshe aadna u Shaqeyso si adag.
卡拉达萨雷蜡ay ka shaqeyneysaa lahaanshaha tayada?
– Angie Silver（@SilverSpoonLDN）贾纳约19，2016
gaabis啊oo joogto啊。 Anigu Waxaan ahay 10 sano oo diiradda saaraya kobaca beeraha
– Fugogaraam iyo Muuqaal（@fuggsandfoach）2016年2月7日
Dhowr ka mid ah kaqaybgalayaasheena Twitter-ga ayaa soo jeediyay isweydaarsi iyo shaqooyin adag oo ah fureka aasaasiga ah ee lagu kordhinayo博客.
Waogaan u maleynayaa在joogtayntu marwalba muhiim tahay。 Anshax ahaan，迪拉达 & 瓦尔巴欣塔布尔什达。 #bloggingtips＃sheygaaga #WHSRnetChat
– Waxaad Ilmahayga Hooyo（@YouBabyMeMummy）贾纳约10，2016
Ku s一团！ Noqo Mid Joogta ah oo oo aan ka baqin inaad la wadaagto qof walba!
– 克里斯蒂娜·尼科尔森（@MediaMaven_CN）Janaayo 2016年
语气wuxuu ka soo baxayaa bogagga wuxuuna kugu xirayaa akhristayaasha。 Markaad u dhowdahay inaad dhagaystayaashaada ku dhageysato，wasca fiican inaad fahamsan tahay waxa ay raadinayaan iyo waa hab lagu fili karo si aad u korto blogkaaga，sidoo kale!
Sidookale，ahaada Ha isku dayin inaad qof kale ku daydo。 Adeegso codkaaga oo samee qaabkaaga.
– Nolosha Qoyska oo ka weyn（@largerfamily）2016年1月15日
Dhawaan，Jerry @ WebHostingJerry，Problogger si uu kaaga caawiyo inaad sii wadato hawlaha博客。 Iska Hubi Kuwan 5 xeeladaha blogging wuxuu ku qeexayaa 2016.
Halkan Waxaa ku yaal qodobo dhowr ah：
Maqaalka la xiriira：2016年西德歌舞剧
#WHSRnetChat Q2。 Maxay Tahay Qalabka Aad u Tagayso ee Maareynta Warbaahinta布尔萨达?
Waa la wada ogyahay在Blogger中wuxuu leeyahay habdhaqan maalinle ah oo licicsan.
Waa inaad akhrido maqaalada，sameyso cilmi baaris qotodheer，qorsheyso joornaalkaaga blogka，kobcinta bartaada，iwm。 Jadwalkaaga waa la buuxiyaa！锡达（Sidaa）飞镖，萨达阿德（wadaad u baahan tahay qalab kaa caawiya inaad克拉德·卡·卡巴托），加尔·阿哈恩·西阿德（maar）.
Maareynta jiritaanka bulshada waa mid ka mid ah qeybaha muhiimka ah ee aadan awoodin inaad lumiso。 Sidoo羽衣甘蓝waa在maareynta jiritaanka bulshada ay ku lumineyso waqtigaaga iyo tamartaada badan中运行。 Waxaan su’aal uga颌骨ay su’aal qorayaasha iyo suuqgeeyayaasha waxaanan halkan u soo jeedinay颌骨aifatiimiyay.
– Waxaad Ilmahayga Hooyo（@YouBabyMeMummy）2016年3月23日
嘿! Xaqiiqdii waa furfurnaan的Buffer，Tweet点唱机+ Dabiiciga bulshada ??? [@buffer @SproutSocial @alphabetsuccess] #WHSRnetChat ???
– Sam Hurley ????????? （@Sam___Hurley）2016年3月30日
Buffer Iyo HootSuite Waa kuwa aan istmaalo inta badan.
– 伊琳·史密斯（@Ileane）24 Maarso 2016
– Ku-xirida Mummey（@AttachmentMumma）2016年毛尔索19
爸爸Badan ayaa jira，Buffer，Hootsuite iwm
– Harleena Singh（@harleenas）马索28，2016
Waxaan ku soo aragnay waxyaabo aan rasmi ahayn oo ku saabsan su’aashan。 U Qaado Tixraac haddii aadan weli go’aan ka gaarin qalabka maareynta warbaahinta bulshada ee xulashada.
Sida aad arki karto，inta badan ka qaybgaleyaasheena waxay kugula talinayaan Buffer，Hootsuite iyo Socialoomph inay yihiin qalab ay u adeegsadaan maareynta warbaahinta bulshada.
Hootsuite iyo Buffer蜡质yihiin拉巴达qalab ee warbaahinta bulshada ee ugu caansan bulshada dhexdeeda。 Waxaad arki kartaa inta hartay.
Haddii aad u baahatid xoogaa hacks dhaqso ah，Waa tan waxa aad u baahan tahay inaad ogaato marka aad isticmaaleyso.
Waxaad xisaabin kartaa dhammaan xisaabaadkaaga warbaahinta bulshada hal meel isla markaana jadwalkaaga ku qor。 Hootsuite ha ka shaqeeyaan goorta ay soo diraan。 Waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad kaydiso mashaakilaadka waxtar leh si dib loogu istmaalo dambe.
Bakhtiintu waxay kuu ogolaaneysaa inaad ku darto RSS feed ah ugula wadaagto boggaaga。 Waxa Kale oo aad wanaajin kartaa taariikhdaada la soo dhajiyay oo leh waqti-gaaban si loo abuuro jadwal dib-loo-qaabeyn ah.
Waa qalab Weyn Marka aad maamusho xisaabaadka badan ee Twitter。 Waxaad abuuri kartaa kaydka safka loogu talagalay tweet-kaaga。 Waxay Kaa Caawineysaa in aad jadwalato fariin qoraal ah oo du kala duwan mar kasta oo la soo diro.
Qeybta xiisaha lihi aniga ila tahay waxaa jira qalab fara badan oo mudan在la xuso。 Waxay u Badan tahay inaadan haysan waqti ku filan oo aad ku baadho dhammaantood.
Aan aragno maamulka羽衣甘蓝ee maareynta warbaahinta bulshada ee beesha Twitter-ku ku talinayaan.
你好，Waxaan u isticmaalaa社交Oomph iyo Tweetdeck laakiin aalad uma adeegsano Facebook.
– Vicky Charles（@SingleMAhoy）2016年7月3日
Waxaan jeclahay Buffer，JustRetweet iyo Manageflitter。 （Kaliya Waxaan isticmaalaa agabyada maamulka ee Twitter）:) #WHSRnetchat #warbaahinta bulshada
– 斯蒂芬妮·巴克利（@eatleepchic_ie）25 Maarso 2016
Wixii Twitter：TweetDeck + "Dhibaato ama raac" dhammaantood waxaan u baahanahay.
– Adrian Jock（@IMTipsNews）2016年4月2日
Waa kuwan qaar ka mid ah qalabka warbaahinta bulshada ee weyn si ay u sahamiyaan：
Shabakad internetka oo awood leh oo kugu caawisa inaad ku koro khadkaaga Twitter iyo Instagram。 Laga soo bilaabo网站-ka，waxaad arki kartaa cidda ku hawlaneyd koontadaada。 Waxa Kale oo ay kaa caawineysaa inaad hesho dadka istmaala munaasabadaha soo socda.
Waa qalab aad u maareyn kartida Twitter si kor loogu qaado ka qaybgalka iyo abuurista raadoyinka imaan kara。 Waxaad la socon kartaa dhammaan isdhexgalkaaga muhiimka ah ee beeshaada gudaheeda。 Waxa ugu fiicani waa，waxaad sameyn kartaa oo kobcin kartaa ololeyaal kala duwan sida jadwalkaaga gaarka ah.
Waa sahlan tahay在la istmaalo。 Kaliya cusbooneysii cusbooneysiintaada maktabada oo samee jadwalka boostada。 Edger wuxuu isticmaali doonaa cusbooneysiinta maktabada si uu u abuuro saf。 Qaybta Ug Fiican Waa，Waxay "自动地" u buuxin doontaa oo buuxin doontaa lafteeda iyo cusbooneysiinnadaada ma aha inay qashinayaan.
Ciyaaraha warbaahinta bulshada ayaa isbedelaya iyo Blog-gaagu u baahan yahay hal ama in ka Badan。 Isku habee ama u dhinto.
Iyada oo ku xiran tahay niche，在沙巴卡达哈城的安塞·阿德·马林·卡塔亚（anya caadi ahayn）.
Maqaalka la xiriira：Falanqaynta warbaahinta bulshada iyo metrices ee ganacsiga si kor loogu qaado hawlgelinta
#WHSRnet聊天Q3。 Waa Maxay Qaabka Ug wanaagsan ee looga bixi karo bloggaaga?
Ka dhigashada lacagta laga helo blogga has iyo jeer waa mawduucda ugu qatarsan internetka。马克·阿德·埃格托·伊斯贝代尔卡·拉丹塔Google，Waa Mid ka Mid ah ereyada ugu caansan ee waqtiga oo dhan.
Maxay taasi kuu sheegaysaa？ Sida Iska CAD Dadka Waxay Raadinayaan颌骨dhab ah.
Bishii Janaayo，2016年，Pat Flynn，Dakhliga Dakhliga Gaarka ah $ 106,492.27。 Waxa uu samaynayaa（ku dhawaad）sida ugu yar ee shirkadda yar ee shirkadda liiska.
Laakiin，meesha iyo waxa la bilaabayo?
Sida laga soo xigtay qaar ka mid ah ka qaybgalayaasheena，habka ugu wanaagsan ee looga helo lacagta blogga waa iibinta shirkadda.
Si：＃1 Guryaha Shirkadda tooska啊，＃2 Heshiisyada Heshiiska La Wadaago＃3亚马逊会员，＃4 Adsense / Media.net.
– Angel Balichowski（@Angelcbali）2016年4月18日
Adeegsiga baloog si aad u bixiso xalka akhristayaashaada ayaa sidoo kale ah hab caan ah oo lacag lagu sameeyo。 Waa tan sida aad u sameyn karto
u jeedi dhagaystayaasha iyo baahiyahooda，waxay bixiyaan xal xallilan（sida：sida loo kordhiyo dhibcaha dhibcaha）ka dibna ku dhex soco
– Zac Johnson（@zacjohnson）2016年4月17日
Isticmaal mareegta jiilka ledhka iyo iibiya alaabooyinkaaga ama adeegyadiinna。马克萨德·马利尼萨?
Isticmaal bartaada sida qalab suuq ah oo soo jiidanaya si aad u soo jiidatid runta，bixiya macaamiisha adeegyada caadiga ah，ee soo noqnoqda.
Gael Breton oo ka socda Hay’adda Hacker ayaa falanqeeyay sida bloggers ay lacag uga helaan barta iyo waxay la yimaadeen qaybaha waaweyn ee 3 halkaasoo lacagta ay ka timaaddo（oo u muuqata mid u muuqata mid s）.
爸爸Badan oo博客作者ah ayaa lacag Badan ku sameeya internetka。瓦拉卡班卡拉.
Maqaalka la xiriira：Sida loo sameeyo（lacago badan）lacag博客ah：fikrado niche，daraasad kiis，iyo istaraatiijiyada taraafikada
Tani waa WHSR Twitter-ka soo-celinta sheekeysiga #WHSRnetChat。 Waxaan rajeynayaa in a faa’iido kuu tahay.
Waxaa lagugu soo dhaweynayaa inaad na siiso fikradahaaga ku saabsan su’aasha ku xigta ee bogga Twitter-ka。 Nagala soo xiriir #WHSRnetChat si aad ula wadaagto khibradaada ama waydiiso su’aalahaaga.
Kahor intaanan dhammeyn xilkeyga，库马阿曼库瓦纳锡耶伊·贾瓦布·塞林。 Aynu isku xirno @WHSRnet
@ sherisaid，@ rozkwalker，@ michelotta，@ 30ishblogging，@ cucumbertown，@ cre8d，@ mousefashion95，@ KintsugiOfLife，@ aannadobreva，@ SalmaDinani，@ kevvieguy，@ DeepaliBhatt4，@ theresamorone，@ BeaverBuilderFriend， ，@ thejfoster42，@ HoylesFitness，@ ImRose1，@ ElleAyEsse，@ MikeSMcDonald，@ WebpresenceUK，@ INNOVEXco，@ B_Grimaldi，@ shyvish，@ mzoptimism，@ UwanaWhat，@ ikechiawazie，@ MinucaElena，@ Fence bloghandsseo
Miyaad ka qayb qaadatay a Taleeshinka Twitter goow dhow? Haddaysan ahayn, maxaa kaa celinaya?